विमान मा हात सामान: ल्याउन के
यात्रा हावा द्वारा अक्सर मात्र उडान हुनेछ कसरी उत्तेजना संग fraught छ। पहिले देखि नै गाह्रो प्रश्न सामान संग जटिल परेशानी "के ल्याउन"। को सामान आफ्नो सबै सम्पत्तिमाथि लिन म छ या तपाईं बोर्ड मा झोला लाग्न सक्छ के? कसरी तरल पदार्थ र कस्मेटिक्स संग हुन? म बच्चा को लागि एक घुमक्कड लाग्न सक्छ? यस लेखमा हामी लैजाने-मा सामान सम्बन्धित सबै भन्दा साधारण प्रश्नहरूको जवाफ हुनेछ।
उडान को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मुख्यतया डिजाइन विमान मा हात सामान लागि नियम। त्यसैले, यात्रु कुनै सामान लिन अनुमति कुराहरू सूची आफ्नो आकार, तौल र गन्तव्य, साथै यात्रा जसमा कक्षा आधारमा सीमित छ। तसर्थ, हात सामान एक हवाइजहाज मा तेज वस्तुहरु, हतियार, ज्वलनशील र विस्फोटक तरल समावेश यदि सानो घर मा नपर गर्न निषेधित छ। एक हतियार रूपमा प्रयोग गर्न वा गर्न सक्नुहुन्छ निषेधित को ढुवानी गर्न, अन्य यात्रु गर्न खतरा अन्य कुनै पनि वस्तुहरू, साथै पशु मूल को उत्पादनहरु। विषाक्त र, यसैले लागि, खतरनाक पदार्थ पनि कीरा विकर्षक लागू गर्न सकिन्छ।
बोर्ड मा के र लिन सक्छ गर्नुपर्छ? कुनै पनि व्यक्तिगत वस्तुहरू तपाईं सामान मा झोला लिन चाहँदैनन् भने उडान समयमा उनलाई आवश्यकता र। यदि कि विमान मा हात सामान धेरै द्वारा सुने तरल पदार्थ, समावेश हुनुपर्दछ, तर तिनीहरूलाई तपाईं सबै ओसारपसार गर्न वास्तवमा। तपाईं मेकअप (आवश्यक पारदर्शी) को clasp मा एक जिप वा अन्य प्याकेज संग तिनीहरूलाई प्याक गर्नुपर्छ। यस्तो प्याकेज प्रदर्शन गर्न सक्छन् र "स्लाइडर" संग पारदर्शी विद्यार्थीको फोल्डर रूपमा। प्रत्येक शीशी मात्रा महत्त्वपूर्ण 100 भन्दा बढी एमएल थियो। यसलाई 1 लीटर को कुल मात्रा बढ्यो किनभने भने, धेरै लिन छैन, कस्मेटिक्स पनि हटाउन सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मा, छेउमा र पानी / रस को एक कचौरा बाहिर सम्झना छैन। एक तरल श्रेणी कुनै पनि gels, pastes, होंठ, क्रीम र अन्य प्रसाधन समावेश मनमा राख्नुहोस्। त्यसैले, अप्रिय आश्चर्य बच्न अग्रिम मा ब्यूटिशियन जाँच र उचित प्याकेजिङ्ग हेरविचार। सिद्धांततः, तपाईं विशेष प्याकेजहरू र केही विमानस्थलको युरोप मा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूले सधैं उपलब्ध छन् र खर्च छैन एक यूरो। तपाईं बोर्ड मा उनलाई आवश्यकता यदि अपवाद, चिकित्सा उद्देश्यको लागि तरल छ, तर तिनीहरूले एक निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
विमान मा हात सामान को आकार के हो? आयाम भन्दा एयरलाइन्स लागि नै हो, यो लम्बाइ / चौडाइ / उचाइ मा 55/25/35 सेमी छ। वजन 8 किलो (एक बिट थप घरेलू उडान) भन्दा बढी पर्छ, तर तपाईं व्यापार वर्ग उड भने, तपाईं दुई हुन सक्छ यी बैग।
के यदि तपाईं एक बच्चा संग उडान गर्दै हुनुहुन्छ? बच्चा दुई वर्ष छ गर्दैन भने, उहाँको लागि एउटा छुट्टै कोठा को अस्तित्व बिना तपाईं अतिरिक्त तपाईं बच्चा को लागि आवश्यक एक गाडी (तह) वा कोक्रो, कुनै पनि भोजन, साथै सबै लाग्न सक्छ। वजन हेरविचार आइटम के विमान आफ्नो व्यक्तिगत हात सामान वजन अधिक 10 किलो हुन सक्छ।
म वाद्ययन्त्रहरू बोक्न सक्छ? हो, तर सबै भन्दा वाहक टिकट समरूपी साधन को पूर्व-दर्ता र दर्ता आवश्यक छ।
तपाईं कसरी मा "कर्तव्य-मुक्त" किनेको जो तरल पदार्थ (जस्तै अत्तर, रक्सी रूपमा), सामना गर्न? मा प्रत्यक्ष उडानहरू कुनै समस्या हुनेछ तिनीहरूले ठीक पसलमा फिर्ता खचाखच भरिएको छ भने। तपाईं विशेष गरी ईयू बाहिर, अर्को देश ट्रान्जिट मा उडान गर्दै भने, माल अर्डर यस्तो वस्तुहरू विशेष विमान जाँच गर्नुहोस्। घर, फिर्ता गर्ने उपयोगी रकम अधिक रक्सी को आयात मा सीमितता थाह।
विमान मा जहाँ हात सामान? प्रकाश वस्तुहरू - को यात्रु, अधिक गंभीर को एक विशेष खण्ड मा - सीट अन्तर्गत।
परिचालन नियन्त्रण मात्र माथि दिइएका नियमहरू लागि तयारी मा। विमान मा हात सामान तपाईं अन्य यात्रु र पाठ्यक्रम को चालक दल असुविधाको हुँदैन। तपाईं उडान केही घण्टा छोड्न सक्छन् जो संग सबै सामान तिनीहरूलाई लाग्न र सामान प्लास्टिक र्याप मा प्याक गर्न बिर्सनु भएन (जस्तै सेवा सबै विमानस्थलको मा लगभग प्रदान गरिएको छ)। यो तपाईंको झोला र सम्भव दूषण विरुद्ध यसका सामग्रीहरू सुरक्षित हुनेछ। त्यहाँ सामान डिब्बे, डिब्बे र अन्य कन्टेनर फुट्छ जब अवस्थामा छन्, त्यसैले सबै भन्दा आवश्यक र सुरक्षित माध्यम मात्र लिन प्रयास गर्नुहोस्।
माथिको-उल्लेख नियम, अनुसार जो विमान रूस र को क्षेत्र मा सञ्चालन मा हात सामान ईयू देशहरूमा। साथै, कृपया कि, ध्यान दिनुहोस् कि केही राज्य अमेरिका मा संयुक्त राज्य अमेरिका कार्य गर्न सक्छ विशेष गरी, र उपकरण र अन्य वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध।
एक यात्रा एजेन्सी कसरी खोल्न।
सेन्ट पीटर्सबर्ग: निलो पुल - को फराकिलोकालागि पुल शहर
के निकोसिया को वास्तु masterpieces गर्व छ हो? Hagia सोफिया - साइप्रस को मुसलमान प्रतीक
स्टकहोम मा शाही महल: फोटो, ठेगाना, विवरण
एक विकास तत्वको रूपमा कम्पनी को बजार योजना गर्न संक्रमण
जीवनी Domogarova, को Mossovet थियेटर अभिनेता
कार "Saneng mousse": विवरण, विनिर्देशों र समीक्षा
दिमित्री Ananko - पूर्व Spartak, टोलीमा फर्के गर्ने
पोलेको हलिबेट: माछा नुस्खा
दिन शान्त 'Grandaxinum'। प्रयोगको लागि निर्देशन